Iskahorimaad ku dhex maray deegaan ka tirsan Mahaday dadka deegaanka iyo ururka Alshabaab - Wargeyska Faafiye
Iskahorimaad ku dhex maray deegaan ka tirsan Mahaday dadka deegaanka iyo ururka Alshabaab
Wararka ka imaanaya degmada Mahaday ee gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in iskahorimaad hubeysan uu ku dhex maray deegaanka Iji qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan ururka Alshabaab.
Iskahorimaadkan ayaa waxaa ku dhintay saddex kamid ah ciidamada ururka Alshabaab oo uu ku jiray sarkaal sare oo caan ka ahaa deegaanada ku dhow dhow degmada Mahaday.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in iskahorimaadkan uu ka dhashay kadib markii maleeshiyaad ka mid ah ururka Alshabaab ay weydiisteen lacago la sheegay in ay tahay Zako ku waajibtay beeraha.
Hase ahaatee qaar ka mid ah dhalinyarada deegaanka Iji ayaa waxa ay si gaadmo ah ku dileen Xasan Faqi oo ahaa amiirka deegaankaa iyo labo kale oo ahaa ilaalada amiirkan.
Illaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka degmada Mahaday iyo sidoo kale ururka Alshabaab.
Deegaano ku yaal dhinaca Bari ee wabiga Shabeelle ee hoos taga degmada Mahaday ayaa waxaa weli maamula ciidamo ka mid ah ururka Alshabaab. Iska horimaadkan ayaa ah kii ugu horeeyay ee ay dadka deegaanka iyo ciidamada Alshabaab ku dhex mara deegaano ka mid ah Mahaday ee gobolka Sh/dhexe
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsTaliyihii NISA ee Sh/dhexe oo la aasay iyo gacan ku dhiiglihii dilay oo la soo bandhigay+SawirroSomalia wants KDF to leave Kismayu.Jose Mourinho Oo Sheegay In Barcelona Ay Weli Ku Jirto Tartanka Horyaalka La Liga.Nuur Cade oo dhaawacmay.Laba Kenyan ah oo loo heysto rag ONLF ah.